Fireproof ákwà Factory - China Fireproof ákwà Manufacturers, Suppliers
Ejiri eriri seramiiki na eriri seramiiki na akụkụ ụfọdụ nke eriri organic, nke nwere eriri iko (waya nchara), gbanye n'ime yarn, wee kpaa n'ime akwa ahụ.
Isi ojiji nke anwụrụ ọkụ ákwà mgbochi mgbidi:
a. Eletriki mkpuchi: anwụrụ ọkụ ákwà mgbochi mgbidi ákwà nwere nnukwu eletriki mkpuchi ọkwa, nwere ike idi elu voltaji ibu, na nwere ike n'ime insulating ákwà, aka uwe na ndị ọzọ na ngwaahịa.
b. onye na-abụghị onye na-akwụ ụgwọ: a pụrụ iji akwa sịlịkọn roba mee ihe dị ka ngwaọrụ njikọ na-agbanwe maka ọkpọkọ. Ọ nwere ike idozi mmebi ahụ na-akpata site na mgbasawanye ọkụ na mgbatị oyi, na akwa silicone nwere nguzogide dị elu dị elu, mgbochi corrosion, arụmọrụ ịka nká, mgbanwe na mgbanwe. Enwere ike iji ya na mmanụ ala, ụlọ ọrụ kemịkalụ, simenti, isi ike na mpaghara ndị ọzọ.
A na-eji tarpaulin na-eme ka ọkụ na-eguzogide ọgwụ dị elu, mgbochi corrosion na akwa akwa iko dị ike, nke a na-etinye ma ọ bụ impregnated na silicone roba. Ọ bụ ọhụrụ mejupụtara ihe onwunwe ngwaahịa na elu arụmọrụ na multi-nzube.
Fireproof ákwà na Silicone Mezie
A na-eji akwa Fireproof mee eriri na-enweghị ọkụ na nke na-enweghị ike ịgbanwu ọkụ, nke a na-edozi site na usoro pụrụ iche. Ihe ndị bụ isi: nke na-enweghị ike ire ọkụ, na-eguzogide ọgwụ dị elu (550-1100 degrees), usoro kọmpat, enweghị mgbakasị, ederede dị nro na nke siri ike, dị mfe iji mechie ihe na akụrụngwa. Uwe ọkụ na-enweghị ike ichebe ihe nwere ike ichebe ihe site na ntụpọ ọkụ na ebe ọkụ, ma gbochie ma ọ bụ wepu combustion kpamkpam.
Uwe ọkụ na-acha ọkụ ọkụ kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ na oge ndị ọzọ na ọkụ na-adị ọkụ ma dị mfe ime ka ọkụ. Ọ nwere ike iguzogide ọkụ, slag, ịgbado ọkụ, wdg, ọ nwere ike iwepụ ebe ọrụ, kewaa ọrụ na-arụ ọrụ, ma kpochapụ ihe ọkụ nwere ike ibute na ọrụ ịgbado ọkụ. A nwekwara ike iji ya maka mkpuchi ọkụ, ma guzobe oghere ọrụ nchekwa, dị ọcha ma tozuru oke.